Taliyihii ciidamada bileyska ee Puntland oo xilkii laga qaaday, taliye cusub oo la magacaabay. – Radio Daljir
Taliyihii ciidamada bileyska ee Puntland oo xilkii laga qaaday, taliye cusub oo la magacaabay.
Oktoobar 31, 2011 12:00 b 0
Garoowe, Oct, 31 ? War laga helay dawladda Puntland ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday taliyihii ciidamada bileyska iyo asluubta ee dawladda Puntland Cali-Nuur Cumar Saalax, waxaana xilkaasi loo dhiibay ku xigeenkiisii Max?ed Siciid Jaqanaf.
Cali-nuur, taliyihii xilka laga qaaday ayaa Radio Daljir u sheegay inuu isagu is-casilay, uusanna hadda doonayn inuu wax waraysi baxsho, balse uu xilligeeda shir jaraa?id qaban doono.
Ma cadda sababta xilka qaadista ee xillan, waxayse imaanaysaa xilli xaalado ammaan oo xasaasi ah ay ka jiraan qaar ka mid deeganada Puntland, sida gobolada Mudug iyo Karkaar.
Al-shabaab oo ku hanjabtay inay weeraro hor leh qaadayaan.